Atrikasa momba ny hainteny :: Raikitra ny fianarana kabary ampitain-davitra maneran-tany • AoRaha
Atrikasa momba ny hainteny Raikitra ny fianarana kabary ampitain-davitra maneran-tany
Manoloana ny tsy fahafahana manatanteraka hetsika fanao mahazatra noho ny fepetra fihibohana, nanapa-kevitra ny foiben’ny Fikambanan’ ny mpikabary malagasy manerantany (Fimpima maneran-tany) fa hanatontosa ny “Handeha hianatra kabary ”. Tsy hiandry ela fa hatomboka anio avy hatrany ity fiofanana ity, raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra.
Indroa ao anatin’ny herinandro no mianatra; isaky ny alarobia manomboka amin’ny 6 ora hariva ka hatramin’ny 8 ora alina sy isaky ny alahady amin’ny 4 ora tolakandro ka hatramin’ny 6 ora hariva.
Ora eto Madagasikara avokoa ireo. An-tambajotran-tserasera no hizoran’ny fampiofanana satria amin’ ny alalan’ny teknôlôjia “zoom” ny hampitana ny fahalalana. Tsy ho voafetra eto Madagasikara ihany ny fahafahana manaraka ny fiofanana fa hahazo izany avokoa ny eran-tany. Manana ny fandaharam-pianarana kabary iraisana ny Fimpima maneran-tany, ka noho izany, hiompana any amin’ny famerenana ny lesona kabary iombonana ny fampianarana, hatreto.
Antsoina hanaraka ny atrikasa avokoa ireo mpiofana kabary rehetra taom-pianarana 2019 – 2020, eo anivon’ny Fimpima maneran-tany. Tsy hifarana ny “Handeha hianatra kabary” raha tsy amin’ny 12 aogositra 2020, araka ny fanamarihan’ny tompon’andraikitra hatrany.
Mpampianatra kabary dimy mianadahy no hiandraikitra ny fampiofanana: Rahantarimanana Sylvia, talen’ny fampianarana sy ny fikarohana sady filoham-paritany Fimpima AMAA Toamasina, Ratsimbazafy Masy Haja, talen’ny fanofanana sy ny fikarohana Antananarivo, Rakotomavo Tafika, talen’ny fampianarana sy ny fikarohana foibe Fimpima ivelan’ny Nosy, Diadema Rakotonirina, talen’ny fampianarana sy ny fikarohana foibe Fimpima Madagasikara ary Andriamboavonjy Hanitra, filohan’ny foibe Fimpima maneran-tany.
Talenta sy valanaretina :: Lehilahy bory tanana mizara ny fiarovany amin’ny Covid-19